राजबिराज–रुपनी सडक खण्डको दूर्दशा, सवारी साधन संचालनमा सकस - News Today
राजबिराज–रुपनी सडक खण्डको दूर्दशा, सवारी साधन संचालनमा सकस
सप्तरीको राजबिराज–रुपनी सडक खण्डको दूर्दशाले सवारी साधन संचालन सकस भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय लहानको गैरजिम्मेवारीपनले निर्माणको कार्यलाई अधुरै छोडेपछि सवारी संचालनमा कठिनाई हुने गरेको हो ।
सडकको दुबैपाखा खाल्डो खनेर अलपत्र छाडिएकाले मुलसडकमा क्षति भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । सडक बिभाग र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले कालोपत्रे खाल्डो भई पुरिएको स्थानीय संतोष यादवले जानकारी दिए । निर्माण कार्य अधुरो छोडिदा मूल सडकको कालोपत्रेमा पनि भारी बोकेर आएका साधनहरु भाँसिएर बाटो अबरुद्ध हुने गरेको स्थानीय राजु जयसवालले जानकारी दिए ।
बिहीबार बालुवा भरिएका ट्रकको दुबै पांग्रा बीचको कालोपत्रेमा भाँसिदा सो मार्गबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने साधनलाई आवतजावतमा समस्या भएको उनले जानकारी दिए । सडक निर्माणको कार्यलाई अधुरो छोडिदा दुर्घटनाको जोखिम समेत उत्तिकै रहेको उनले बताए । बर्सेनी सडक पेटी खन्ने र ग्राईभल हाल्ने कार्य हुन्छ स्थानीय संचारकर्मी नर्मदेव यादवले भने, कुन निकायले काम गरेको हो त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन । आयोजनामा बजेट कति हो ? र कहिले सम्ममा योजना सम्पन्न गर्ने भन्ने सांकेतिक बोर्डहरु समेत राखिएको छैन उनले थपे– सधै एउटै काम गरेर बजेट मात्र सक्ने ? सडक निर्माण नगर्ने तथा भएको सडक समेतमा क्षति गर्ने उपर कारबाही गर्नुपर्ने यादवको भनाई छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय लहानका प्रमुख रबिन्द्र लाल दासले स्थानीय दुई निर्माण कम्पनीसँग सडक निर्माणको ठेक्का दिएको बताए । बिकास निर्माण सेवा लहान तथा वल्डब्वाई अजय जेबी लहान सिरहा बीच ११ महिना भित्र काम सक्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । उनले सडकको पेटीमा भएको ग्राईभर निकालेर फेरि नयाँ ग्राईभल लगाउने योजना मात्र भएकोले कालोपत्रे नगरीने जानकारी दिए । दासले सम्झौता बमोजिम सडक निर्माण कार्यलाई अधुरो छोडे निर्माण कम्पनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको टोलीले लथालिङ्ग छाडिएकाको सडकको स्थलगत निरीक्षण गरि अबस्थाबारे जानकारी लिएपनि सडक निर्माण कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले सडक डिभिजन कार्यालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा बोलाएर निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएपछि थोरै निर्माणको कार्य गरेपनि बाँकी काम अधुरै रहेको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय लहानले निर्माण कम्पनीलाई दोष दिदै आफू पन्छिने गरेका छन् ।
Previous : राजबिराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको दुई महिनाको भत्ता साढे छबिस लाख
Next : नियति बन्दै रुपनी सडक